ukuhambisana amawindi 10
Umbuzo ukuhambisana amawindi 10
unyaka 1 11 edlule #344 by alainthomas21
Ingabe FSX iyahambisana namafasitela 10?
Thanks for impendulo yakho ..
unyaka 1 11 edlule #345 by JanneAir15
Yebo, kuyasiza on Windows 10. Ngithathe empeleni usebenzisa FSX on Windows 10 futhi isebenza kahle.
unyaka 1 11 edlule #346 by Gh0stRider203
Uma uneminye nezindaba, lokhu site kungase kusize. Friend of Mine iyasebenza Steam Edition futhi lalinethonya ezinye izinkinga.
unyaka 1 11 edlule - unyaka 1 11 edlule #347 by Colonelwing
Gh0st ,,, got umbuzo ngawe ,,,
I abe version of FSX GOLD Edition ku CD ibhokisi kusuka Microsoft kusukela eminyakeni fiew manje.
Ngisebenzisa ukuthi okufushane njengoba isikhathi eside kwi-PC amadala futhi ufuna ukuthola
the FSX zibe ukuphela kwami ​​omusha okusezingeni SIM kuphela PC enginalo manje. Bengicabanga ukuze uthole izindaba zothando umusi FSX ,,,
kodwa ngifuna qiniseka befort okwenza ethutha umusi ukuthi FSX GOLD Edition yami CD ibhokisi version enginalo
Umsebenzi yamabhuku ku Win 10 ukuthi enginazo ukuphela kwami ​​omusha okusezingeni NEW PC Sim.
I tought FSX GOLD Editon CD Ibhokisi umsebenzi okufushane didnt kusaba uma sifuna ukuba FSX GOLD Edition ku
Umbuzo ,, engingayenza namanje ukusebenzisa yami CD ibhokisi FSX GOLD Edition version on entsha Win 10 ukuphela okusezingeni PC yami kwabaningi
ukuza ,, iminyaka noma ngenze ama-switch ku umusi version of FSX?
unyaka 1 11 edlule #348 by Gh0stRider203
Honestly yomuntu, ngokuqinisekile ngizoyiphula Angiqiniseki. Uhlobo lwakho Gold KUFANELE lisasebenza kulokho Ngifundile lapha
Namanje ngisasebenza egijima Windows 7 kudeskithophu Namanje, futhi besebenzisa Gold Edition.
Colonelwing wabhala: Gh0st ,,, got umbuzo ngawe ,,,
ukuza ,, iminyaka noma ngenze ama-switch ku STAEM version of FSX?
unyaka 1 11 edlule - unyaka 1 11 edlule #349 by Colonelwing
Ngiyabonga Gh0st engaka!
Yeah Ngicabanga ukuthi ngeke namanje umsebenzi omuhle ,, njengoba mina dont sebenzisa noma isiphi bukhoma inthanethi ezindizayo nge version yami futhi njalo fly okungaxhunyiwe ku-intanethi.
Its not for the addons njengoba mina dont siwasebenzise amafayela yami FSX ,, mina ukulayisha addons aircrafts kuphela ukuzama bese thela kubo
off PC yami noma zibe zipfiles ukuba ahlale khona kuze kube sengathi ngingalala ngaso ezindizayo nabo aphinde e FSX amafayela SIM futhi.
Objectif wami oyinhloko kabusha ukulayisha PMDG yami B737NGX wami DVD ebhokisini okufushane ibe kunamandla PC ekupheleni okusezingeni enginalo manje ngoba zendiza sebenzisa kuphela. Ngakho ngicabanga ukuthi nonke umsebenzi omuhle kimi njengoba engikufundile on at umusi ,, they dont abaningi kangaka ushintsho kwenziwe futhi ngeke kuthinte indlela mina fly on FSX ngoba wona osele anesikhathi eside noliphayona nasesikhathini esizayo.
Manje njengoba singabantwana ndaba FSX SIM ,,, for PC lami elisha Win10 ,,, Bengilokhu ngifuna a HOTAS omkhulu anamathele kanye mpintsha
ukuthi usebenza kakhulu. Njengoba Logitech yami endala ulungela for ukwenza phezu ,, kodwa ngipheni kweminyaka eminingi kangaka ezindizayo okuhle.
Ungakwazi ongawabala kimi HOTAS ubungeke okucatshangelwa ukusebenzisa for periode ezinhle iminyaka nezinkinga noma inkinga ,, meen the QControl kufanele kube sekupheleni totaly olukhulu noma phezulu.
Ngazi fiew ezimakethe ,,, kodwa ngingathanda ukumuzwa side yakho ye indaba mayelana HOTAS wena bangathi nami at.
Zonke ezinye izizwe Ungaphendula ngalokho yayiyoba HOTAS ngingaya afune ukusebenzisa njengoba umshayeli PRO.
Noma yimuphi TAG Intengo ,, doesnt udaba kimi ...
Siyabonga ngokwabelana wakho umbono kanye nakho kuleyo ndaba HOTAS ...
unyaka 1 11 edlule #350 by Gh0stRider203
kuphela "online" flying ngenzeni ngempela usebenzisa isofthiwe indiza kokulandela lol uma uya lapha , Uzobona indiza yami, kanti abanye nabo ezindizayo. KDFW - LFRG - KDFW kuyinto umzila wami evamile lol the "ukhokhe" is pretty ehloniphekile lol
unyaka 1 11 edlule #351 by Colonelwing
indiza yami, kanti abanye nabo ezindizayo. KDFW - LFRG - KDFW kuyinto umzila wami evamile lol the "ukhokhe" is pretty ehloniphekile lol
I pay ehloniphekile eh ,,, lol
Njengoba usho, mina akazange online ezindizayo ,, yayo yonke entsha kimi. Kodwa akukusha kimi ezivela ezweni ezindizayo wangempela ,, esobala enokukhanya kwelanga ukuthi iholo umzila kahle ,, lol
Siyabonga ngokwabelana lokhu nami sokukhwelana ,, Cheers!
unyaka 1 11 edlule #352 by Gh0stRider203
Colonelwing wabhala: indiza yami, kanti abanye nabo ezindizayo. KDFW - LFRG - KDFW kuyinto umzila wami evamile lol the "ukhokhe" is pretty ehloniphekile lol
Ulwazi VA sika My uma uchofoza-Akhawunti Balance, futhi wenze izibalo, uzobona ngenza lo VA imali esezingeni elifanele. I njalo zihlanganisa lokho ngenza njengoba umshayeli, njengoba Ngivame ukusebenzisa lokho ukuze asize pay for izinyoni kanye Manje uma nje ngingaqeda ubenza kangako RL lol
unyaka 1 11 edlule #356 by Colonelwing
Siyabonga ukwabelana isixhumanisi umngane womshado!
Isikhathi ukudala page: 0.396 imizuzwana